Wixii Somaliland ku Lahaayeen Dadka Soomaaliyeed Mar Walba si Kaloo Gaar ah ha loo Maamulee Way Lahaayeen’ | Araweelo News Network
Wixii Somaliland ku Lahaayeen Dadka Soomaaliyeed Mar Walba si Kaloo Gaar ah ha loo Maamulee Way Lahaayeen’
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo caddeeyey in aanay Somaliland hore uga qaybgeli jirin shirarka loo qabto Soomaaliya
Hargeysa (ANN)Madaxweynaha Soomaaliya Mr. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa caddeeyey in aanay Somaliland hore uga qaybgeli jirin shirarka lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo waraysi uu siiyey telefiishanka la yidhaah Somali Cable TV, isla markaana la weydiiyey su’aal ahayd in ka maqnaansha Somaliland ee shirarka Soomaaliya ay dhibaato ku noqonayso maamulkiisa, waxaannu ku jawaabay in aanay arrintaasi wax dhibaato ah lahayn, maadaama aanay Somaliland horeba uga qaybgelin shirarkoodii hore loogu qabtay.
“Dabcan, Somaliland way maqnaan jirtay shirarkii hore loo qaban jiray oo shirarkan iyo New Deal (qorshaha cusub ee Soomaaliya) waa qaar Soomaaliya leedahay, mar walbana wixii reer Somaliland ku lahaayeen dadka Soomaaliyeed mar walba tixgelin gaar ah ha loo sameeyo amma si kale oo gaar ah ha loo maamulee way lahaayeen,” ayuu yidhi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxa kaloo uu sheegay in shirkii caalamiga ahaa ee Soomaaliya loogu qabtay dalka Turkiga toddobaadkan aannu ahayn mid dhaqaale lagu qorsheeyey, balse lagu dejiyey qorshayaal kale oo la xidhiidha hawlaha dhismaha iyo doorashooyinka Soomaaliya.
“Shirkan ka dhacay Turkigu waxa uu kaga duwanaa, kuna cusbaa shirarkii hore u dhici jiray waxa uu ahaa ka maqnaansha Maamulka Puntland, arrintaasna aad iyo aad ayaannu uga xunahay, sababta reer Puntland ku maqan yihiina maaha sabab la xidhiidha shirkan iyo New Deal-ka (qorshaha cusub), laakiin waa sabab siyaasadeed oo khuseeya doorashooyinka sannadka 2016 iyo sida wax u dhacayaan,” ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaannu ballanqaaday inuu wadahadal la furi doono Maamul-goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, si looga qanciyo waxyaabaha ay tabanayaan ee ay kaga maqnaadeen shirkii u dambeeyey ee ka dhacay dalka Turkiga.